रामायणमा रावणको भूमिका निभाउने अरविन्द त्रिवेदीको निधन ? यस्तो भन्छन् भतिजो – Koshidaily
मुख्य पृष्ठसमाजरामायणमा रावणको भूमिका निभाउने अरविन्द त्रिवेदीको निधन ? यस्तो भन्छन् भतिजो
रामायणमा रावणको भूमिका निभाउने अरविन्द त्रिवेदीको निधन ? यस्तो भन्छन् भतिजो
२२ बैशाख २०७७, सोमबार ०४:४२ प्रकाशित
टेलिभिजन सिरियल रामायणमा रावणको भूमिका निभाउने अभिनेता अरविन्द त्रिदेवीको मृत्युको खबर हावासरी फैलियो । आइतबार सोसल मिडियामा दिनभरी उनको मृत्युको खबरले निकै चर्चा पायो । तर उनको मृत्युको खबर मात्र एउटा अफवाह भएको प्रमाणित भयो जब उनका भतिजो कौस्तुव त्रिदेवीले ट्वीट गर्दै उनी सकुशल भएको जानकारी दिँदै झुटो खबर नफैलाउन अपिल गरे ।